हिमाली टुप्पाबाट प्रसारित हुने चिसो बतास तराईका मैदानमा किन पुग्दैन मन्याङगेरी ? घाँटी नै न्याकिरहने यी सपनाबाट मुक्ति दिलाइदेऊ । निद्रा नै बिथोल्ने यी भयंकर सपनबाट छुट्कारा दिलाइदेऊ ? ‘आशाको जीवनमा मृत्युको आभामानआऊ तिमी,लिएर नौलो कथा ।’
अचानक म झस्किन्छु अनि सोच्छु गहिरो निद्राबाट ब्युँझिएर– यो कस्तो रंगमञ्चको यात्रा थियो । समयले त धेरै घाउहरू भरिदिन्छ रे ! अतीतका कडा स्मृतिहरू भुलाइदिन्छ रे ! तर मैले सकिनँ मन्याङगेरी । आज पनि म याद गर्छु । तान्जानियाबाट कोमरोस हुँदै फेरि अर्को मालबाहक पानी जहाज चढेर माडागास्करको महाजंगा पुगेको । यो यात्रा खाली खाली थियो किनकि जहाज पनि खाली खाली थियो । म आज पनि सोच्छु संसार यात्रामा कहिले काही फेरि पनि त्यही बाटो दोहोर्‍याउन नसकिने रहेछ । के तपाईंलाई थाहा छ लालुपाते फूलको पातलाई बीचबाट दोबारेमा माडागास्करको नक्सा बन्छ ? प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७६ ११:३४